Incwadi eyodwa yabo bonke abangane bethu — yeluleka ngokuthi ungasishiya kanjani kude ne-covid-19
Isikhathi sokuthumela: Feb-14-2020
Bangani Abathandekayo, Manje kunanini ngaphambili, kulesi sikhathi sesidingo, ukusekela omunye nomunye sekuyinto yethu. Ngokubambisana siqhubekela phambili ngokubekezela nethemba ngokubhekana nokungaqiniseki. Njengoba sisebenza kanzima ukuvikela impilo nenhlala-kahle yethu, singathanda ukuhlanganyela indlela yethu yokuvikela ...Funda kabanzi »
Isikhathi sokuthumela: Sep-20-2019
Sawubona, wonke umuntu, kunezindaba ezinhle eyodwa kithi kanye nawe, sithuthukise isitayela sokumiswa esisha se-posture corrector-smart posture. Izithombe zesethenjwa sakho njenge, ...Funda kabanzi »
Isikhathi sokuthumela: Apr-20-2019
Ngokwezibalo, njalo ngonyaka kuba neziguli ezihlaselwa isiguli ezi-1,2-1,8 million, ezingama-400000-800000 ngonyaka zokufa kwabantu kanye nezinga lokukhubazeka elingu-86,5%. Ngokwezibalo zabanye izifundiswa, phakathi kweziguli ezisindayo ezinesifo, ama-10% abuyiselwe emsebenzini ngaphandle kokukhubazeka okusobala, ama-40% asala nokukhubazeka okuncane, 40 ...Funda kabanzi »
Isikhathi sokuthumela: Apr-18-2019
Sawubona, wonke umuntu, kunezindaba ezinhle eyodwa kithi kanye nawe, sithuthukise umakhi omusha wesitayela sokumiswa esisha. Izithombe zesethenjwa sakho njenge, ...Funda kabanzi »
Ukugubha-ngokubambisana nefektri yeRUKANG yezihlalo ezinamasondo nabahamba ngezinyawo
Isikhathi sokuthumela: Mar-20-2019
Jabulani ngemfudumalo ukusebenzisana kweHongzhu yezokwelapha noRukang ukusayina izivumelwano ezikhiqizweni zabakhubazekile. Izinkomba ezivela kuzo zombili izinhlaka, uMnu Yang noMnu Lv baya kuwo futhi bathembisa ukuthi bazozama konke okusemandleni ukusekela izivumelwano ngokuqinile. Kusukela manje kuqhubeke, abezokwelapha baseHongzhu bangakwazi ukukunikeza isondo ...Funda kabanzi »
Imikhiqizo emisha efika-ye-inflatable lumbar brace
Isikhathi sokuthumela: Feb-20-2019
Sawubona, wonke umuntu, kunezindaba ezimbili ezinhle kithi sonke, sakha i-inflatable lumbar brace. Kunemibala emi-2 ongayikhetha. Izithombe zesethenjwa sakho njenge, Le mikhiqizo yethu emisha, ihamba kahle kakhulu uma ugqoka, futhi isebenza kakhulu ekukhululeni izinhlungu okhalweni. Uchiline ophathekayo ufaka ...Funda kabanzi »
Imikhiqizo yokufika entsha ye-super cervical neck traction
Isikhathi sokuthumela: Dec-31-2018
Sawubona, wonke umuntu, kunezindaba ezimbili ezinhle kithi sonke, sithuthukise idivaysi ye-super soft yomlomo wesibeletho. Kunemibala emi-4 yokuzikhethela. Izithombe zesethenjwa sakho njenge, Le mikhiqizo yethu emisha, ihamba kahle kakhulu uma ugqoka, futhi isebenza kakhulu ekukhululeni kobuhlungu bezintamo. I-Therapeutic effec ...Funda kabanzi »
Sawubona, wonke umuntu, kunezindaba ezimbili ezinhle kithi sonke, sithuthukise idivaysi ye-super soft yomlomo wesibeletho. Kunemibala emi-4 yokuzikhethela. Izithombe zesethenjwa sakho njenge, Funda kabanzi »
Isikhathi sokuthumela: Mar-10-2018
Sawubona, wonke umuntu, kunezindaba ezinhle eyodwa kithi kanye nawe, sithuthukise umakhi omusha wesitayela sokumiswa esisha. Izithombe zesethenjwa sakho njenge, Le mikhiqizo yethu emisha, ihamba kahle kakhulu uma ugqoka, futhi isebenza kakhulu kwi-posture fixator. Ngikholwa ukuthi unokuqonda okuthile: ku h ...Funda kabanzi »
Izici ezi-7 zokuvikelwa okhalweni sowesifazane (2)
Isikhathi sokuthumela: Jan-10-2018
Qhubeka okwesibili, ukugqoka okhalweni kunomsebenzi othile wokusekela nowokuthwala. Ukugqoka indawo efanelekile okhalweni kungadlulisa ingxenye yesisindo somzimba ophezulu ngokusebenzisa izimbambo okhalweni lwethamboac. Amandla okugoqa kanye nemisipha yesisu esishubile ekhiqizwe ukujikeleza kwesinqe kungaba i-als ...Funda kabanzi »
Izici ezi-7 zokuvikelwa okhalweni sowesifazane
Isikhathi sokuthumela: Jan-09-2018
Ukuxhaswa kweLumbar kukhulu futhi ngaphezulu kwabesifazane abahlala phansi, ngoba abesifazane abanokuya esikhathini, ukukhulelwa, ukubeletha abantwana, ukuncelisa kanye nezinye izici zomzimba, futhi banezimpawu zezifo ze-gynecological, ngakho-ke Ubuhlungu obuphansi emuva buyimpawu ezijwayelekile. Ngakho-ke ukuwuvikela kanjani okhalweni lwethu ngokufanele ...Funda kabanzi »
Indima yedivaysi yokuqina kwentamo yomlomo wesibeletho nokuthi ungabukhulula kanjani ubuhlungu bentamo
Isikhathi sokuthumela: Oct-10-2017
Izisebenzi zanamuhla ezimhlophe zenza amakhanda phansi isikhathi eside, okuzobangela ukuba izicubu ezingemuva kwentamo zikhathale ngokweqile, futhi zizocindezela wonke amandla adonsela phansi emathanjeni e-vertebrae yesibeletho. Ngemuva kwesikhathi eside, kuzodala ukuthi i-disc ye-vertebrae yomlomo wesibeletho ivele,Funda kabanzi »